Monday August 03, 2020 - 20:47:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weerar naf hurnimo oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho.
Weerarka oo ahaa mid ishtish-haadi ah ayaa lagu beegsaday goob ay isku yimaadeen saraakiil farabadan oo kawada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Magaalada Muqdisho.
Goobtan ay Al Shabaab weerarka ku beegsadeen ayaa ku taalla degmada Xamar Jajab waxayna ay kaabiga ku haysaa xarumo dhawr ah oo muhiim u ah dowladda sida xabsiga dhexe, xarumaha maxkamadaha daaquutka ah, xarumaha wasaaradaha iyo saldhigga degmada Xamar Jajab.
Xilliga uu weerarku dhacayay waxaa goobta la beegsaday ku sugnaa saraakiil iyo maleeshiyaat aad u farabadan oo kasoo kala baxay xarumahaas iyaga ah waxaana halkaas ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray cadawgii la beegsaday.
War kasoo baxay taliska ciidamada Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in 9 ka tirsan saraakishii iyo maleeshiyaatkii labeegsaday ay halkaas naftooda ku waayeen halka dhaawucuna uu gaarayo illaa 14 kale.
Warka kasoo baxay taliska ciidamada Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in camaliyadu ay qayb ka tahay hawgallada Jihaadiga ah ee lagu ugaarsanayo cadawga iskusoo bahaystay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo boobka hantida Muslimiinta Soomaaliyeed.
Weerarka maanta duhurkii ka dhacay degmada Xamar Jajab ayaa fajaciso iyo filanwaa ku noqday laamaha ammaanka dowladda Federaalka Soomaaliya maadaama halka lala beegsaday ay ku taallo goob si aad ah ammaankeeda loo ilaaliyo isla markaana ay deganyihiin masuuliyiin farabadan oo ka tirsan waxa loogu yeero hay'adaha ammaanka kooxda ridada sida booliska, sirdoonka iyo kuwa maamullada wasaaradaha iyo maxkamadaha daaquutka ah.